Prasta Khabar-जनकल्याणको शिविरमा २३० जनाको उपचार
जनकल्याणको शिविरमा २३० जनाको उपचार
२ भदौ, हेटौँडा । हेटौँडा–६ चौघडामा रहेको जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले संचालन गरेको स्वास्थ्य शिविरमा २ सय ३० जनाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको छ । संस्था स्थापनाको २३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा निःशुल्क शिविरको आयोजना गरेको हो ।
लायन्स क्लव अफ काठमाण्डौं सिञ्चितको सहयोगमा आयोजना गरिएको शिविरमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप र आँखाकोे स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । शिविरमा डा. बसन्त पौडेल, डा. अरवेन्द्र गुप्ता र बुल्गेरियाबाट आएका डा. कनिका चौला, लिना लिम्बु र अभिनेयाले विरामीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए । शिविरमा नारायणी मेडिकल कलेज, मकवानपुर टेक्निकल ईन्स्टिच्युट र दृष्टि आँखा केन्द्र विरगंजबाट समेत सहयोग गरिएको थियो ।
जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सल्लाहकार बद्रीबहादुर पाठकको प्रमुख आतिथ्यता एवम् लायन्स क्लब अफ काठमाण्डौ सिञ्चितका अध्यक्ष मोहन मानन्धरको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष हिमाल पौडेल, लायन्स क्लव अफ काठमाण्डौ सिन्चितका चाटर्ड प्रेसिडेन्ट गोपाल न्यौपाने लगायतकाले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
शिविरमा ३० जनाको आँखामा मोतिया विन्दु भेटिएको थियो । मोतिया विन्दुका रोगीहरुलाई विरगंजमा रहेको दृष्टि आँखा केन्द्रले सहुलियत दरमा अप्रेशन गर्ने संस्थाले जनाएको छ ।